Huawei P40 4G dia nambara fa tsy misy modem 5G ary mihena ny vidiny | Androidsis
Huawei dia nandefa any Shina ny kinova vaovao an'ny maodely P40 ambanin'ny tamba-jotra 4G ary miaraka amina endri-javatra mahaliana vitsivitsy ary na inona na inona modem 5G tafiditra ao amin'ny Kirin 990. Ny telefaona dia nasehon'i JD ary nataony izany taorian'ny nanehoany tsara ny varotra modely P40, P40 Pro ary P40 Pro + 5G.
Izy io dia miavaka amin'ny zavatra vitsivitsy amin'ny maodely izay natomboka tamin'ny volana martsa tamin'ny taon-dasa, noho izany dia miatrika modely iray ihany isika fa miompana amin'ny tsena aziatika amin'izao fotoana izao. Ity kinova ity, toy ny an'ny hafa, dia tsy hiala amin'ity faritra ity any amin'ny firenena hafa, noho izany dia voahilika ny fipetrahana any Eropa.
1 Huawei P40 4G, finday avo lenta misy fampisehoana mahatalanjona
2 Batterie capacité lehibe
Huawei P40 4G, finday avo lenta misy fampisehoana mahatalanjona
Ny efijery dia iray amin'ireo tanjaka lehibe, izany dia 6,1 mirefy OLED Full HD +, ny tahan'ny fanavaozana dia 60 Hz ary ny tahan'ny lafiny 19,5: 9 amin'ny 422 dpi. Ny tontonana dia mitentina 92,5%, saika ny eo alohany, zara raha manana bezel, eo amorony ihany.
Ny chip dia Kirin 990 miaraka amin'ny fifandraisana 4GTsy miaraka amin'ny modem 5G izy io, noho izany dia ho mora vidy kokoa noho ny maodely hafa izy ary ny faritra sary dia rakotry ny Mali-G76. Mampiditra RAM 8 GB izy, ampy ho an'ny fampiharana na lalao video, ary koa fitehirizana 128 GB miaraka amin'ny Cards NM.
Ao aoriana ny Huawei P40 4G dia mampiseho sensor telo total, ny tena lehibe dia 50-megapixel RYBB avy any Leica, ny faharoa dia zoro 16-megapixel, ary ny fahatelo dia telephoto 8-megapixel miaraka amin'i OIS. Ny fakan-tsary voalohany dia 32 megapixels, voahodidin'ny sensor ToF.
Batterie capacité lehibe
Ny bateria dia 3.800 mAh, mahazaka ny Kirin 990, izay mahomby ary koa manome fluide be amin'ny karazana fampiharana. Mampanantena fahaleovan-tena efa ho iray andro miaraka amin'ny sarany 100%. Huawei dia manana mpanatsara bateria ary EMUI dia azo alamina hanesorana ireo fampiharana ao aoriana.
Ny bateria dia mijanona amin'ny 22,5W, ny maodely P40 Pro mahatratra 40W, mbola miakatra haingana dia haingana izy satria hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100% dia maharitra 45 minitra. Ny tsara dia ny famerenam-bidy dia azo atao mihoatra ny 20% raha tsy tsikaritr'ilay bateria fa miakatra.
Huawei P40 4G tonga miaraka amin'ny fifandraisana 4G / LTETsy manana ilay modem 5G voalaza etsy ambony izy ary hiasa eo ambanin'ny tambajotran'efatra amin'ny fomba haingana. Izy io dia miaraka amin'ny Wi-Fi 4, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, ary port USB-C handefasana azy ankoatry ny fampiasana ny écouteur. Ny mpamaky ny dian-tànana dia eo ambanin'ny efijery.
Ny rafitra fandidiana dia hijanona Android 10, ny fanavaozana ny kinova hafa dia haharitra kely, satria ny HarmonyOS 2.0 dia mbola eo amin'ny dingana matotra. EMUI 10.1 tonga miaraka amin'ny patches farany ary izy no ho ilay sosona izay mitantana ny fitaovana raha vantany vao avadinao ao anaty boaty ilay izy.
SCREEN 6.1-inch OLED miaraka amin'ny famaha Full HD + (2.340 x 1.080 teboka) / Refresh rate of 60 Hz / Format: 19.5: 9/422 dpi
PROCESSOR Huawei Kirin 990 4G
KARATRA GRAPHIC Small-G76
FITONDRANA AN-TANY 128 GB / Slot ho an'ny karatra NM
CAMERA REAR 50 MP sensor lehibe / 16 MP sensor lehibe zoro / telefaona 8 MP miaraka amin'ny zoom optika / OIS 3x
CAMERA HATRANY 32 MP Sensor / ToF Sensor
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 miaraka amin'ny EMUI 10.1
BATERA 3.800 mAh misy fiampangana haingana 22.5W
CONNECTIVITY 4G / WiFi 4 / Bluetooth 5.1 / GPS / NFC / USB-C
OTHER Mpamaky ny rantsantanana / IP53 amin'ny efijery
DIMENSION SY lanjan'ny 148.9 x 71.1 x 8.5 mm / 175 grama
El Huawei P40 4G dia ho tonga ao Shina ho hany tsena, ka tsy hisy fahatongavana any amin'ny firenen-kafa amin'izao fotoana izao raha tsy amin'ny alàlan'ny JD fanta-daza. Ny maodelin'ny 8/128 GB dia mitentina eo amin'ny 3.899 yuan, eo ho eo amin'ny 508 euro raha hanova ary tonga ao anaty boaty miaraka amina headphone sy charger 22,5W. Ny loko roa misy dia manga sy fotsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei P40 4G dia nambara fa tsy misy modem 5G ary mihena ny vidiny
Ahoana ny fomba hidirana haingana amin'ny lahatahiry Google Drive amin'ny Android
Ny lalao vaovao sy tsara indrindra amin'ny herinandron'ny 22 Febroary amin'ny Android